Seerri federeeshinii kubbaa miilaa biyyattii akka geddaramuu gaafatame
Filannoo pirezidaantummaafi koree raawwachiiftuu hojii Federeeshina Kubbaa Miilaa Itoophiyaaf dorgomaa kan jiran kaadhimamtonni naannoo Oromiyaa seerri federeeshichaa jijjiiramuu akka qabu ibsani. Kaadhimamtootnni kunneen kana kan ibsani wayita karoora hojiisaanii miidiyaaleef ibsa kennanittidha.
Pirezidaantummaaf dorgomaa kan jiran Obbo Isaayyaas Jirraa karoorasaanii akka ibsanitti, seerri Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ittin hojjechaa jiru guddina kubbaa miilaa biyyattiirratti dhiibbaa olaanaa waan uumeef geddaramu qaba. Kunis, seera Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa(FIFA)fi Konfedereeshina Kubbaa Miilaa Afrikaa(CAF) baasaniin alatti sochiin kubbaa miilaa taasifamaa jiraa jedhanii, kunimmoo seerota kanneen waliin waan walfaallessuuf jijjiiramuu akka qabu ibsaniiru.
Isaanis waggootan 23n darbaniif sochiwwan adda addaa koree kubbaa miilaa Oromiyaa keessatti taasisaa turuusaanii yaadatnii, muuxannoo olaanaa qabaachusaanitti pirezidaantummaadhaan gaggeesuuf dorgomaa jiraachusaanii himaniiru.
Akka ibsa kaadhimamaa kanaatti, seenaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti Itoophiyaan waancaa kubbaa miilaa Afrikaa akka jalqabamu adda dureedhaan ga'ee olaanaa taphattus ammaan tana maqaadhaaf malee kubbaa miilaarraa edda fagaattee oolee buleera. Biyyoonni kaleessa wayita gareen kubbaa miilaa biyyattii taphatu jajaa turan har'a ammoo Itoophiyaan duubatti deebi'uudhaan faallaasaa teessee ilaalaa jirtii, jedhaniiru. Kunimmoo dhaloota har'aa waliin bakka kaleessaatti deebisuuf ciminaan hojjechuun murteessaa ta'uusaa mul'isaa, jedhaniiru.
Rakkoolee gurmaa'ina ispoortii kubbaa miilaa keessatti mul'ataniin kan ka'e kufaatii garee kubbaa miilaa biyyaaleessaaf qaamni abbummaadhaan itti gaafatamu waan hinjirreef seerri haaraa bahu akka falaatti kan fudhatamu ta'uusaa himaniiru.
Koree raawwachiiftuu hojiif Oromiyaa bakka bu'uun kan dorgoman Doktar Haayilee Ittichaafi Obbo Kamaal Huseen gamasaaniin, kufaatii ispoortii kubbaa miilaa Itoophiyaa baraaruuf walta'iinsaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Furuufis nuffii malee kan hojjetan ta'uusaaniis ibsaniiru.
Torban kana/This_Week 43552
Guyyaa mara/All_Days 1468332